Nhoroondo yeIndonesia | Kuparidza muWest Java Uye Nyaya Yeheti Yapapa
Muna 1933, Frank Rice akakumbira Theodorus (Theo) Ratu, aiva chizvarwa chemuNorth Sulawesi kuti vashande vese paisvikira mabhuku edu kuJakarta. “Ndakatanga kufarira chaizvo basa rinokosha reUmambo uye ndakatanga kuparidza pamwe chete naHama Rice,” akadaro Theo. “Ndakazobatana naBill Hunter kuenda kunoparidzira kuJava uye ndakabatanawo nehama dzaishandisa Lightbearer parwendo rwekuenda kuSumatra.” Theo ndiye aiva munhu wekutanga wemuIndonesia kugamuchira chokwadi, uye akapayona kwemakumi emakore kuJava, kuNorth Sulawesi, nekuSumatra.
Gore rakatevera racho, Bill Hunter akapa mumwe mukomana ainzi Felix Tan kabhuku kanonzi Where Are the Dead? Panguva iyoyo Felix aidzidza pane chimwe chikoro muJakarta. Paakadzokera kuBandung, West Java, uko kwaiva nemhuri yavo, Felix akaratidza munin’ina wake Dodo kabhuku kacho. Vese vakashamisika pavakaona kabhuku kacho kachitaura kuti munhu wekutanga Adhamu akanga asina mweya usingafi. Adhamu ndiye aitova mweya wacho. (Gen. 2:7) Felix naDodo vakada kuziva zvakawanda zvinodzidziswa neBhaibheri, saka vakaenda kuzvitoro zvemuBandung zvaitengesa mabhuku vachitsvaka mamwe mabhuku akabudiswa neWatch Tower. Vaiudzawo vamwe vemumhuri mavo zvavainge vadzidza. Pashure pekunge vapedza kuverenga mabhuku ese avakawana, vakanyora tsamba vakaitumira kwaisvikira mabhuku muJakarta. Vakashamisika pavakaona vashanyirwa naFrank Rice, uyo akavavigira mamwe mabhuku uye akavakurudzira chaizvo.
Hama Rice vachangodzokera kuJakarta, Clem naJean Deschamp avo vainge vachangobva kuchata, vakashanya kuBandung kwemazuva 15. Felix akati: “Hama Deschamp vakabvunza mhuri yedu kuti pane vaida kubhabhatidzwa here. Vanhu 4 vemumhuri medu vanoti, inini, Dodo, hanzvadzi yangu Josephine (Pin Nio), naamai vangu (Kang Nio), takazvitsaurira kuna Jehovha ndokubhabhatidzwa.” * Pashure pekunge mhuri yekwaTan yabhabhatidzwa, yakabva yabatana naClem naJean pamushandirapamwe wekuparidza kwemazuva 9. Clem akavadzidzisa kuparidza vachishandisa kadhi rokupupura iro raiva nemashoko eBhaibheri asina kuoma akanyorwa mumitauro mitatu. Pasina nguva, boka diki iri raiva muBandung rakava ungano uye ndiyo yakaita ungano yechipiri muIndonesia.
Basa rekuparidza parairamba richifambira mberi, vafundisi vemachechi anozviti ndeechiKristu vakatanga kuzviona. Saka ivo nevatsigiri vavo vakanyora nyaya mumapepanhau vachishora basa reZvapupu uye dzidziso dzavo. Vakuru vakuru veDhipatimendi Rinoona Nezvezvitendero pavakaona nyaya idzi, vakashevedza Frank Rice kuti vazomubvunzurudza. Pavakagutsikana nemhinduro dzake, vakuru vakuru vacho vakabvumira kuti basa reZvapupu rienderere mberi. *
Makore ekuma1930 achangotanga, vakuru vakuru vehurumende vakawanda vakanga vasingarambidzi basa redu rekuparidza. Asi bato reNazi remuGermany parakatanga kutonga muEurope, vamwe vanhu vaiva nemasimba kunyanya vaya vaiva vakanyura muchechi yeRoma, vakatanga kupikisa Zvapupu. “Mumwe mukuru mukuru wehurumende aipinda chechi yeRoma uyo aiona nezvekupinda nekubuda kwezvinhu munyika, akatora mabhuku edu ese ainge atumirwa achiti aitaura zvakaipa nezveNazi,” akadaro Clem Deschamp. “Pandakaenda kuDhipatimendi Rinoona Nezvekupinda Nekubuda Kwezvinhu Munyika kuti ndinochema-chema, ndakawana mukuru mukuru uya wokutitorera mabhuku aenda kuzororo. Murume akanga akafanobata chigaro chake akanga asingapindi chechi yeRoma uye aiva munhu akasununguka. Saka akabva angotipa mabhuku edu achiti: ‘Torai ese amunokwanisa murume uya asati adzoka!’”
“Pane imwe nguva, hurumende yakasimbirira kuti tibvise mifananidzo miviri yaiva mubhuku rinonzi Enemies,” akadaro Jean Deschamp. Hurumende “yainge isina kufara nemufananidzo wairatidza nyoka ichizvonyongoka (Satani), nemumwe wairatidza hure rakadhakwa (chitendero chenhema). Nyoka yacho nehure racho zvese zvakanga zvakapfeka heti yapapa. * Taida chaizvo kupa vanhu bhuku racho. Saka tiri vatatu takagara panosvikira zvikepe tiine zviuru zvemabhuku tichivhura rimwe nerimwe kuti tidzime heti yapapa yaiva pamifananidzo yacho, uku tichigochwa nezuva!”
Mifananidzo miviri yaiva mubhuku rinonzi Enemies yakanzi ibviswe nehurumende
Nyika dzemuEurope padzakanga dzava pedyo nekurwa hondo, mabhuku edu akaramba achifumura unyengeri hwaiitwa nemachechi anozviti ndeechiKristu uye kupindira kwaaiita mune zvematongerwo enyika. Saka vafundisi vakabva vatanga kufurira hurumende kuti irambidze basa redu, uye mabhuku edu akawanda akabhanwa.
Asi hama dzakanga dzakatsunga kuenderera mberi nebasa, uye dzakatanga kushandisa muchina wekuprinda mabhuku wadzakanga dzawana kubva kuAustralia. (Mab. 4:20) Jean Deschamp akatsanangura imwe nzira yavaishandisa achiti: “Mutemo waiti pese pataiprinda bhuku idzva kana magazini, taifanira kuendesa rimwe chete kuhurumende kuti itipe mvumo yekuti bhuku racho ripiwe vanhu. Asi taiprinda mabhuku acho toaendesa kuungano dzakasiyana-siyana vhiki ichangotanga. Taitozoendesa kopi yebhuku racho kugweta guru rehurumende vhiki rava kunopera. Kana bhuku racho rikanzi hariiti, taingonyepedzera kusuruvara uye taibva tamhanya kunoprinda rimwe bhuku rinotevera.”
Hama nehanzvadzi dzaiwanzoita hwekitsi negonzo nemapurisa, padzaipa vanhu mabhuku akanga abhanwa. Somuenzaniso, rimwe zuva Charles Harris achiparidzira muKediri, kuEast Java, akasvika pane imwe imba asingazivi kuti panogara mupurisa.
Mupurisa wacho akati: “Ndanga ndichikutsvagai zuva rese. Mira ndinotora pepa rakanyorwa mabhuku enyu akabhanwa.”
Charles akati: “Mupurisa uya paaigwedebudza mumba, ndakabva ndaviga mabhuku akabhanwa muhomwe dzemukati mebhachi rangu. Paakadzoka, ndakamupa mabhuku 15 akanga asina kubhanwa. Achiratidza kuti akanga ashaya zvekuita, akazongondipa mupiro wake uye mabhuku aya akanga akabhanwa ndakazoapa vamwe vaigara kumberi muraini iroro.”
Kuprinda Mabhuku Pazvainge Zvakaoma
Hondo Yenyika II payakapararira munyika dzese dzemuEurope, kwakanga kusisina mabhuku aibva kuNetherlands achienda kuIndonesia. Sezvineiwo, hama dzakanga dzatoona dambudziko richiuya saka dzainge dzatoronga kuti imwe kambani yemuJakarta iprinde magazini acho. Magazini yekutanga yeConsolation (yava kunzi Mukai!) yakatanga kubuda muchiIndonesian muna January 1939, uye Nharireyomurindi yakazotanga kubudawo muchiIndonesian pashure penguva pfupi. Hama dzakabva dzatenga muchina mudiki wekuprinda uye dzakanga dzava kuprinda magazini acho dzega. Muna 1940, vakazowana muchina wakakura wekuprinda kubva kuAustralia uye ndiwo wavakashandisa pakuprinda tumabhuku nemagazini muchiIndonesian nemuchiDutch, vachishandisa mari yavo pakuita zvose izvi.
Muchina wekutanga wekuprinda unosvika muJakarta
Musi wa28 July 1941, mabhuku ese eWatch Tower Society akazobhanwa nehurumende. Jean Deschamp anoti: “Rimwe zuva ari mangwanani pandaitaipa ndiri muhofisi, madhoo akangoerekana avhurwa ndokubva papinda mapurisa matatu nemumwe mukuru mukuru wavo wekuNetherlands uyo ainge akapfeka hembe dzebasa, aine nyembe, magirovhosi machena, bakatwa neheti yaiva nemunhenga. Hazvina kumbotishamisa. Mazuva matatu izvi zvisati zvaitika takanga tarumwa nzeve kuti mabhuku edu achabhanwa nekukurumidza. Mukuru mukuru wacho akaverenga gwaro rakareba uye akabva ati aida kuti tiende naye kwaiva nemuchina wekuprinda kuti auvharise. Asi murume wangu akamuudza kuti akanga adya manonoko nekuti muchina wacho wakanga watotengeswa nezuro wacho!”
Asi Bhaibheri rakanga risina kubhanwa. Saka hama dzakaramba dzichiparidza paimba neimba dzichingoshandisa Bhaibheri chete. Vaiitisawo zvidzidzo zveBhaibheri. Asi panguva iyoyo zvaiitika zvairatidza kuti hondo yaigona kungotangawo muAsia, saka mapiyona aibva kunze kwenyika akaudzwa kuti adzokere kuAustralia.
^ ndima 1 Pava paya baba vaFelix pamwe chete nevanin’ina vaFelix vatatu vakavawo Zvapupu. Hanzvadzi yake Josephine, yakazoroorwa naAndré Elias uye vakazopinda Chikoro cheBhaibheri cheWatchtower cheGiriyedhi. Nyaya youpenyu yaJosephine yakabuda muMukai! yaOctober 2009.
^ ndima 1 Pakapera Hondo Yenyika II, Frank akadzokera kuAustralia uye akava nemhuri. Hama Rice vakapedza upenyu hwavo hwepasi pano muna 1986.
^ ndima 3 Mifananidzo yacho yakadhirowewa pachifungwa nezvemashoko ari pana Zvakazarurwa 12:9 ne17:3-6.
Indonesia: West Java Inoita Zvibereko